Ny boky nofidiko amin'ny taona. Famerenana | Literatiora Vaovao
Ny boky nofidiko amin'ny taona. Famerenana
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 27/12/2021 12:00 | Tantara an-tsary, mpanoratra, boky, Novela, Noely mainty, TANTARA
Tapitra ny 2021. Taona hafa famakiana, latsaka noho izay mety ho azony, fa ilaina foana. Na izany aza, mety ho taonako izany, saingy vetivety izao dia tsy mangovitra ny rantsantanako eo amin'ny takelaka sy ny tanako eo amin'ny taratasy rehefa nanomboka iray aho ary tsy naharesy lahatra ahy izany. Talohan'ny nanaovako ny ezaka sy namarana izany. Fantatro ny atao hoe manoratra boky sy ny ora ary ny fizotran'ny famokarana sy ny fampiroboroboana mba hahazoana izany amin'ny mpamaky. Fa izao ... Na izany na tsy izany, izay voalaza, dia ho ny taona ary koa ny fahafantarana fa tsy hisy fotoana ara-materialy hamakiana izay rehetra tianao. Io fifantenana boky io dia natao ho an'ny tena manokana, mba hazava, fa hanasongadina vitsivitsy hafa izay navoaka teo aloha ihany koa aho. Enga anie ny taona ho avy dia hitondra tantara tsara ho antsika. Tratry ny taona 2022!
Voalohany indrindra dia milaza izany, misaotra ny sitrana boky Fair avy any Madrid, afaka niarahaba sy niarahaba ny sasany tamin'ireo mpanoratra ireo aho noho ireo tantara voafidy ireo, toa an'i Domingo Villar, Daniel Martín Serrano na Iñaki Biggi.
1 Vakiteny amin'ny taona
2 Manonona manokana
3 Ary Manuel Bianquetti
Vakiteny amin'ny taona
Ny fanjakana - Jo Nesbø
Izany no anaram-boninahitra iraisam-pirenena izay ipetrahako. Tsy mahagaga raha ny paroasy mahazatra mamaky ahy dia mahafantatra avy lavitra fa i Jo Nesbø no fahalemeko.
Ary ity no anaram-pirenena izay asongadiko amin'ity taona ity. Biby voalohany amin'ny tantara - fa tsy literatiora - an'ity mpanoratra, mpanoratra ary mpampianatra ity izay tsy afaka nanao ny bitany tsara kokoa.
Ny dihin'ny adala - Victoria Mas
Nanana fanontana tsy venal ho fanomezana avy amin'ny namana iray aho ary naka izany indray tolakandro. miavaka tantara nosoratan'ilay mpanoratra frantsay Victoria Mas izay nanohina ny foko sy Nanoro hevitra aho isan-taona. Noho ny tanjany, ny fanamelohana azy ary ny sariny ara-tsosialy momba ny vanim-potoana iray.
Tantara feno - Domingo Villar
Tsy zava-baovao fa tsara ny zavatra nosoratan'i Domingo Villar, amin'ny endrika tantara 600 pejy na tantara toy ireny. Miaraka amin'ny fanoharana mahafinaritra toy ny namana ihany no afaka manao anao, ny valiny dia famakiana tolakandro izay mameno anao fantasy, fihetseham-po ary nostalgia.
Maty amin'ny novambra - Guillermo Galvan
A Carlos Lombardy, Guillermo Galván, ilay polisy taloha lasa mpitsikilo tao Madrid taorian'ny ady, nihaona taminy aho tamin'ny herintaona ary tiako izy. Misy koa ity tantara fahatelo ity. Ary mihoatra noho ny teti-dratsiny, ity trilogy ity dia miavaka amiko noho ny azy toerana mahafinaritra an'i Madrid tamin'ny efapolo taona sy ny style richness amin’ny soratanao.
Blacksad 6. Mianjera ny zava-drehetra, ampahany voalohany - Juanjo Guarnido sy Juan Díaz Canales
Roapolo taona no nifankatia tamin'ity andian-tantara tantara an-tsary ity - miaraka amin'ny lohateny 6 monja - ary mpitsongo tena mahazatra toy ny manafintohina azy. John blacksad, ilay saka lehibe anthropomorphic mainty. Tsy nandiso fanantenana ny tantarany fahenina ary ny 22 no hitondra antsika ny lavanty.
Tetikasa Moses - Iñaki Biggi
Nanomboka ny taona niaraka taminy aho ary tsy afaka nanao tsaratsara kokoa. Fanomezam-boninahitra lehibe avy amin'ity mpanoratra San Sebastian ity ho an'ireo tantara momba ny ady amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany faharoa miaraka amin'ny lohateny toy ny Roa ambin'ny folo avy amin'ny hazo (ny fanondroanao mazava indrindra) na Ireo fantsakan'i Navarone.
Ilay zazalahy miaraka amin'ny bobbins - Pere Cervantes
Mihetsiketsika sy maharitra miaraka amin'ity tantara ity miaraka amin'ny a sarin'ny Barcelone taorian'ny ady, miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra ny sinema, mpilalao sarimihetsika lehibe ary iray amin'ireo olo-malaza tsara indrindra sy mahatsiravina indrindra amin'ny karazana.
Ary Manuel Bianquetti
Eny eny. Tena zava-baovao ho ahy ny namaky Ny fanodikodinana sokatra y Ny voina sunflower ary fantaro ny protagonista, ilay Manuel Bianquetti goavana amin'ny lafiny rehetra noforonin'i Benito Olmo. Namaky (na nohanina) tao anatin'ny herinandro mahery kely, i Bianquetti dia nandady tao anatin'io lisitr'ireo mpandray anjara amin'ny karazana izay nalaina avy hatrany. sombintsombin'ny foko mainty kokoa. Tamin'ity taona ity koa aho dia namaky ny vaovaonao, Ilay mena lehibe, miaraka amina mpilalao karismatika hafa. Saingy tena mijanona ao amin'ny Bianquetti aho.
Ary koa, ny tsara indrindra efa afaka milaza aminao manokana a Benito Olmo ary fantaro izay ho avy kinova sarimihetsika efa eo amin'ny famokarana ary miaraka amin'ny mpilalao sarimihetsika izay, mazava ho azy, dia mamely farafaharatsiny ny sary an-tsainako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Haisoratra ankehitriny » Literatura » boky » Ny boky nofidiko amin'ny taona. Famerenana
Ny bokin'i Elena Ferrante
Ahoana ny fanoratana boky sy famoahana azy